Free video Converter ho an'ny finday Android - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Free video Converter ho an'ny finday Android
Tsy mendrika ny ho tafiditra ao amin'ny gadget
Ny Android rafitra fandidiana haingana dia haingana fampandrosoana ho lehibe mpifaninana taorian'ny nivoahanySamsung, ny Ericsson, LG, Huwei, Rohy sy ny hafa finday mpanamboatra dia foana avy amin'ny finday fitaovana Android rafitra fandidiana.
Ity finday rafi-miasa dia maro ny fatiantoka, ny iray dia ny tsy fahafahany ny fanohanana rehetra video endrika.
Mazava ho azy, dia afaka mampiasa izany mba hijery sarimihetsika, horonantsary, download videos, ary ny zavatra hafa rehetra, fa ny rafitra no tsy manaiky ny rehetra ny endriny. Ny horonan-tsary izay tsy mifanaraka amin'ny tokony ho niova fo voalohany. Ataovy azo antoka fa ny rakitra endrika tsy tohanan'ny ny fitaovana. Mba hanaovana izany, dia mila azo antoka, ny fifadian-kanina sy mahomby video Converter ho an'ny Android. Mba hanamora ny farany, dia hanolotra anao ny malaza indrindra maimaim-poana fampiharana eny an-tsena.
Mihoatra ny iray tapitrisa ny fametrahana, Video Niova fo Android dia iray amin'ireo tena azo ampiharina ny fitaovam-pandraisana fa afaka na oviana na oviana download, ary raha te-hanana ny lahatsary avy amin'ny loharanom-baovao.
kintana amin'ny mpampiasa indrindra, fampiharana izany dia marina fa k. Ankoatry ny, fa indrindra ny manohana aloha dikan-ny Android. Ity Android video Converter fampiharana afaka mahafantatra saika ny rehetra ny lahatsary endriny samihafa toy ny WEBM, WMV, MPG, FLV, ny AVI, DIVX, MOV sy ny maro hafa. Mampiasa ny Youtube rindrambaiko ho an'ny Android raha te-hiova finoana lahatsary hafa endrika, nalaina teny avy amin'ny lahatsary, ary hampihena ny haben'ny rakitra ny lahatsary. Azonao atao ihany koa ny niova fo antontan-taratasy mba hihazona ny tany am-boalohany ny tsara sy ampanjifaina ny lahatsary toe-javatra araka ny safidy manokan'ny. Mandroso ny Acroa haino aman-Jery Studio, Foana, Fo mazava sy madio interface tsara fa mahatonga azy hijery lehibe fampiharana. Izany dia tena mora ampiasaina sy ny isan-karazany manohana lahatsary endriny samihafa, izany hoe SOLOMBAVAM-bahoaka, FLV, MOV, MKV, ny AVI, WMV, RMVB, etc, izany dia mamela anao mba niova fo malaza amin'ny lahatsary endriny samihafa, nalaina teny avy amin'ny horonan-tsary, ovay ny lahatsary ary koa manohana ny fanamelohana ho faty fomba ho aoriana ny asa, izany dia mety ho iray-tsindry fifanakalozana bokotra. Ny maimaim-poana lahatsary fiovam-po ho an'ny Android fampiharana finday dia manohana amin'ny alalan'ny dokam-barotra. Mila mendrika ny habeny. MB, ary dia mifanaraka amin'ny finday Android miaraka amin'ny dikan, ary ambony. Video Converter-poana dia fampiharana izay afaka manao fototra lahatsary fiovam-pony tena tsara. Toy ny hafa, afaka maka raki-peo tahaka ny SOLOMBAVAMBAHOAKA, nalaina horonantsary lalamby, ary nalaina toe-by-toe lahatsary. Ary manohana endrika malaza toy ny GP, SOLOMBAVAMBAHOAKA, FLV, ny AVI, MOV, RM sy ny RMVB. Maimaim-poana io lahatsary fiovam-po ho an'ny Android fampiharana dia manana asterisk, ary maimaim-poana tanteraka mifanaraka amin'ny finday Android ny farany dikan. Mety tsy ho ny tsara indrindra video Converter ho an'ny Android, araka ny manolotra tena tsotra rakitra fanovana, fa na dia izany aza, tsy ampy, kely, latsaka za-draharaha ireo mpampiasa dia afaka mahita ny mora ny mampiasa interface tsara dia ampy ho Ankapobeny ny asa. Raha mijery ny isan'ny olona izay manana fahefana eo amin'ny fitaovana, izany no azy.
Ny rafitra mety ho fahadisoam-panantenana, saingy fampiharana ity dia vao haingana ihany no ho azo ao amin'ny Google Play.
Araka ny mpandraharaha, fitaovana ity dia mamela anao misintona ny horonan-tsary sy niova fo azy ireo ho endrika isan-karazany. Amin'izao fotoana izao dia manohana be ny endrika isan-karazany, anisan'izany ny XVID, VOB, DVD, MPG, GP, FLV, MOV, DIVX sy ny maro hafa. Maimaim-poana io video Converter ho an'ny Android no tsara tarehy tsara tarehy interface tsara. Ny fitambaran'ny volomparasy sy fotsy mahatonga azy tsy manam-paharoa raha oharina amin'ny hafa. Ny bokotra dia lehibe ampy mba hanohana izany, ary tsara tarehy mora ampiasaina. Ity video Converter dia ho Android dia tonga lafatra ho an'ny finday amin'ny voalohany dikan-ny Android. Tsy toy ny olon-kafa, izay ao fitadiavana avo ny rafi-miasa, ny fampiharana dia afaka mihazakazaka eo amin'ny Android dikan. Koa izany no tena maivana, amin'ny K manao izany tsara ho an'ny fitaovana voafetra ny fahatsiarovana ny loharanon-karena sy voafetra computing hery. Izany dia fantatra noho ny asa lehibe eo amin'ny niovany-tsary mpeg lahatsary ny SOLOMBAVAMBAHOAKA.
Ankoatra izany, io rindrankajy manao ny tsy manana be dia be ny fomba fiasany sy ny maoderina lahatsary fanovana endri-javatra.
Satria ny fampiharana izany dia natao mba hiova finoana fototra antontan-taratasy, dia afaka mampiasa ity fitaovana ity raha manana ny taloha finday avo lenta na ny takelaka amin'ny somary efa lany andro fepetra arahana. Raha ny telefaonina tsy ny fanohanana ny lahatsary endrika tianao ny mamaky ianao, dia afaka mampiasa foana ny iray amin'ireo Android lahatsary converters soso-kevitra etsy ambony mba ataovy mifanaraka. Araka ny hitanao izao, indrindra, raha tsy izy rehetra, ny fitaovam-pandraisana soso-kevitra ato amin'ity lahatsoratra ity endri-javatra fanampiny mihoatra fotsiny manova lahatsary antontan-taratasy. Ankoatra izany, apps sasany ahitana dokam-barotra, raha ny hafa dia tanteraka ad-poana. Tsy mahagaga izany, raha jerena fa ireo rindrambaiko maimaim-poana. Arakaraka ny zavatra ilaina, ny safidy dia tsy voafetra raha toa ka ilaina ny mijery ny lahatsary iray fa tsy raisina an-tànana amin'ny alalan'ny Android.
internet ny fifandraisana an-tserasera
და სტატისტიკა, თავისუფალი შესვლის და რეგისტრაციის გარეშე
video firesahana amin'ny aterineto tsy misy fisoratana anarana vehivavy video ny lahatsary amin'ny chat roulette Ny fiarahana amin'ny chat video Mampiaraka ny vehivavy online toerana velona Mampiaraka tsy misy fisoratana anarana amin'ny chat roulette online mahafinaritra raha tsy misy ny finday amin'ny chat roulette anglisy Fiarahana tsy misy fisoratana anarana amin'ny finday